नारायणगढ–मुग्लिन सडक सामान्य वर्षामै ठप्प, के होला असार–साउनमा ? | इच्छा खबर |
नारायणगढ–मुग्लिन सडक सामान्य वर्षामै ठप्प, के होला असार–साउनमा ?
चितवन, २४ बैशाख । निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा वर्षासँगै पहिरो खस्न थालेको छ। पहिरोकै कारण शनिबार उक्त सडक एक घण्टा अवरुद्ध हुन पुग्यो। शनिबार चितवनमा हल्का वर्षा भएको थियो। यसले बर्खाको मुख्य सिजनमा थप समस्या निम्तिने चिन्ता बढाएको छ खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा चितवनबाट रमेशकुमार पौडेलले लेखेका छन्।
चितवन जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तका अनुसार यस वर्ष पहिरोले बाटै थुनिएको यो पहिलो घटना हो । यसअघिका पहिरोमा तत्कालै एकतर्फी गाडी चलाउन सकिन्थ्यो । अघिल्ला वर्ष समस्या मानिँदै आएको सुक्खा पहिरोले पनि यसपालि खासै अप्ठेरो पारेन।
आयोजना कार्यालयले भने पहिरो नियन्त्रणका काम सुरु भएकाले बर्खामा पनि ठूलो समस्या नहुने जनाएको छ । ‘पानी परेसँगै पहिरो खस्ने समस्या नदेखिएको हैन तर नियन्त्रणको काम पनि सुरु गरेकाले अघिल्ला वर्षजस्तो ठूलो समस्या दोहोरिने छैन,’ आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर (डीई) गोविन्द खनालले भने। आयोजनाले गत महिनादेखि पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु गरेको र यसमा १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनले जानकारी दिए।
विश्व बैंकको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुरूप दुई लेनको बनाइँदै छ । सुरुमा दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त म्याद गत वर्ष नै सकिएको छ । त्यसपछि थपिएको म्याद सकिन पनि अब महिना दिनभन्दा कम समय बाँकी छ। अहिलेसम्म ८२ प्रतिशत हाराहारीमा काम सकिएको डीई खनालले जानकारी दिए।
पहिरो नियन्त्रणको काम भने असारसम्म सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए । ‘३१ ठाउँमा पहिरो जोखिम देखिएकाले तिनै ठाउँमा नियन्त्रणको काम हुन्छ,’ खनालले भने, ‘चोरखोलादेखि मुग्लिनसम्म पाँच किलोमिटरभित्रै १६ ठाउँमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ नारायणगढदेखि ३१ किमि दूरीमा पर्छ चोरमारा । अहिले पहिरो खस्न पनि त्यही क्षेत्रमा थालेको छ । ‘शनिबार चोरखोलामै पहिरो खसेर बाटो बन्द भयो । गत वर्ष पनि त्यहाँ ठूलै पहिरो गएर वरपरका घरसमेत हटाउनुपरेको थियो,’ डीई खनालले भने।
वर्षायाममा गत वर्ष ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा सो सडक लगातार ४३ घण्टासम्म ठप्पै भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ । सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि सुक्खा पहिरोले दुईजनाको ज्यान लिएको छ । त्यस्तै वर्षायामको पहिरोमा परेर तीन प्रहरी र एक चालकको ज्यान गएको छ।